Madaxweyne Farmaajo oo ka qeeybgalay shirka wadamada iskaashiga islaamka ee Makka – Puntland Post
Posted on June 1, 2019 June 1, 2019 by Cowke
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeeybgalay shirka wadamada iskaashiga islaamka ee Makka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galay Meertada 14aad ee Shir-madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka kaasoo diiradda lagu saarayay iskaashiga, amniga iyo horumarka dalalka Islaamka.
Shirkan ayaa laga soo saaray baaq wadajir ah oo loogu magac daray ‘Baaqa Makka’ kaasoo adkeynaya midnimada Dowladaha Iskaashiga Islaamka, lagagana soo horjeestay ururrada argagixisada iyo fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ku haya dadka Muslimiinta ah.
Madaxweynaha ayaa inta uu shirka socday waxa uu kulan doceedyo la yeeshay qaar kamid ah Madaxda, Boqorrada iyo Amiirrada dalalka Islaamka, isagoona la wadaagay dadaalka Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku bixinayaan horumarka iyo dowladnimada, waxuuna ka codsaday dhankooda in ay sii kordhiyaan tageerada iyo garab istaagga walaalahooda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa xasuusiyey hoggaamiyeyaasha uu la kulmay dhibaatooyinka ku gadaaman Muslimiinta ku nool daafaha dunida oo shirkani u arkayey fursad wax lagaga qaban karo dhibaatooyinkooda, haddii la muujiyo midnimo, wadashaqeyn iyo iskaashi.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey Boqor Salmaan Binu Cabdulcasiis martigelinta sare ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa tan iyo markii ay soo gaareen dhulka Boqortooyada Sucuudi Carabiya.
Puntland iyo Koonfur Galbeed oo heshiis ku gaaray Baydhabo
Puntland oo xukuno ku riday 5 eedeysane
Xil. Cali: Farmaajo wuxu dafiray jiritaanka Sool iyo Sanaag isago raali-gelinaya dad iyaga lamid ah
Dowladda Turkiga oo Garoowe ka furanaysa xafiis laga helayo adeegyada fiisaha dalkaas
A “Compromise” Somali Prime Minister
Puntland Blazes a Trail for Women’s Quota Advocacy
Institutionalising Political Inequality in Somalia
Embezzlement of Public Funds Ruins the Somali Economy
Federal Member States Clip Somali Political Parties’ Wings